Okugqwesileyo kufakwe kwi-2 Bedroom Duplex enombono wolwandle.
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguGeraldine
Lo mhlaba umi kumanqanaba ama-2. Umgangatho wokuqala unegumbi lokuphumla elivulekileyo elinokufikelela kwi-terrace. IneSatellite TV/WIFI. Kukho ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo, indawo yegumbi lokutyela iphakathi kwe lounge/ikhitshi. Indlu encinci yokuhlambela.
Phezulu inamagumbi amabini okulala, enye inebhedi ephindwe kabini, enye inebhedi ezi-2 zomntu omnye, zombini zine-Air- Conditioning. Igumbi elinye lokulala libonelela nge-balcony eneembono zolwandle. Ipropathi ifikeleleka ngezinyuko, kunye neendawo zokupaka ngaphandle kwesitalato.
Idama lingavalwa ukusuka ngoNovemba ukuya kuJuni..
Le yeyona ndawo iphambili kwaye yenye yezona ndawo zibalaseleyo ezinokuthi i-El Campello ibonelele. Le ndawo yaziwa njenge 'pueblo Españyol' yindawo efunwa kakhulu kunxweme lwaseCosta Blanca kunye neDolophu yase-El Campello emnyango wakho kodwa uxolo kunye nokuzola koBumelwane baseSpain. Isakhiwo seAlmadraba sihlala ngaphakathi kweemitha ezingama-80 zolwandle lweMeditera kunye nendawo encinci elunxwemeni elunxwemeni. Kukho indawo yokutyela entle ngaphakathi kwemihlaba entsonkothileyo kunye nokuhamba nje okufutshane ungafumana iSquare kunye neebhari zayo kunye neeresityu.
Idolophu ephambili, i-marina kunye nolwandle lwase-El Campello kukuhamba nje imizuzu eli-10 kwaye ungathatha ukhetho olubanzi lweendawo zokutyela kunye nemivalo endleleni.
Ukundwendwela iiDolophu kunye neeLali kutheni ungathathi inkonzo yetram enexabiso eliphantsi nethembekileyo ekwiimitha ezingama-400 ukusuka kwindawo enzima kwaye inokukuqhagamshela eBenidorm, eAlicante City, eLa Villajoyosa ukukhankanya nje iindawo ezimbalwa ezinomdla. Terra mitaca theme. Ipaki, iAqulandia kunye ne Mundamar Benidorm inokufumaneka ngokusebenzisa le sistim yetram ngodibaniso lwasekhaya lwenkonzo yebhasi kwisiphelo somgca weBenidorm.
Kukho ukhetho lweendawo zegalufa zasekhaya onokukhetha kuzo ngemizuzu nje eli-10 ekufutshane ngemoto okanye ngaphandle kwemoto Ikhosi yeGalufa ye-Alicante ikunxibelelwano lwetram. Isikhululo seenqwelomoya e-El Altet Alicante yimizuzu engama-25 yokuqhuba ukuze uqalise ngokukhawuleza ukuphumla kwiholide yakho.
Ipropathi ibekwe kumanqanaba ama-2 kunye nomgangatho woku-1 ikunika indawo yokuphumla evulekileyo, ikhitshi, indlu yangasese kunye negumbi lokutyela kunye ne-balcony entle ekunika umbono wolwandle lweMeditera kunye nendawo yedama lokuqubha. Kumgangatho ongaphezulu kulapho uya kufumana amagumbi amabini okulala kunye negumbi lokuhlambela. Ngaphandle kwegumbi lokulala elikhulu kukho enye i-balcony eneembono eziphefumlayo zolwandle ezibonakala zichukumiseka. Ipropathi ibekwe kumgangatho wokuqala kunye nokufikelela ngezinyuko, indawo yokupaka ngaphandle kwesitrato iyafumaneka.
Indawo enoxolo ikunikeza indawo yokuqubha ebanzi yasekuhlaleni kunye nendawo yokutyela. Phuma kwindawo enzima kwaye ngaphakathi kweemitha ezili-100 unokuthatha idiphu kwiMeditera. Indawo entle kakhulu yeeholide zosapho
Ndizakufumaneka kwiindwendwe kulo lonke ixesha lokuhlala kwazo ukuba banazo naziphi na iingxaki ezinokunditsalela umnxeba.
Inombolo yomthetho: AT-444523-A
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- El Campello